झूर हिन्दी फिल्मको नक्कल गरेर नेपाली सिनेमा सुध्रदैन
म ‘सत्य हरिश्चन्द्र’लाई पहिलो नेपाली सिनेमा मान्दछु । ‘सत्य हरिश्चन्द्र’लाई पहिलो मान्ने हो भने नेपाली सिनेमाको इतिहास लगभग ७ दशक लामो भइसक्यो ।
नेपालमा छायांकन गरेको पहिलो चलचित्र ‘आमा’लाई नै मान्ने हो भने पनि ६ दशक भइसक्यो । आज यति धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले चलचित्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा मान्ने गरेका छैनौं ।
राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको उद्देश्य लिएर जेजति क्रियाकलापहरू सञ्चालन भए । तिनले कहीँकहीँ विश्राम लिए । त्यसदेखि अलग किसिमका गतिविधिले त्यसलाई छोप्दै र घिसार्दै अघि बढ्दै गयो । फलस्वरुप हामीले नेपाली देखिने जस्तो सिनेमा मात्रै बनायौं । नेपाली सिनेमा त हामीले बनाउन बाँकी छ । मलाई थाहा छैन, सिक्दै छौं ? तसर्थ राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय किन हुन सकेको छैन ? नेपाल बहुसांस्कृतिक, रंगीचंगी फूलबारी हो । आज ३ हजार सिनेमालाई केलाएर हेर्दा नेपालको मल्टिडाइमेन्सनलका बारेमा सिनेमा कथा बनेका छन् त ? प्रश्न छ ।
कतिपयले त कुरा नै गरेका छैनन् । कुरा गरे पनि त्यसको शैली तपाईंले सोचेको भन्दा पर गएर कुरा गरेका छन् । नत्र भने हुबहु सुन्दरता बोकेका अनेक थरीका कथाहरू राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगमा समेटिन सकेका छैनन् । सोचौं, आजसम्म नेपाली दन्ते कथा सिनेमा बनेको छ त ?
झण्डै २ दशकसम्म नेपाली भनिने चलचित्रका लागि नेपालीले पटकथा नै लेखेका छैनन् । हामीसँग सिनेमा छायाँकार, सम्पादन, अडियो रेकर्डर, कलरिस्ट थिएन होला । चलचित्रसँग जोडिएको प्राविधिक दक्षता हासिल गरेको दक्ष जनशक्ति थिएन होला । तर, नेपालमा सिनेमाको कथा, संवाद लेख्न नजान्ने र कथाका आधार, पटकथाको विकास गर्न नजान्ने मान्छेहरू मात्रै थिए त ?
सिनेमाको सुरुवातभन्दा धेरै अघि साहित्यको आगमन भएको हो । आमा र सत्य हरिश्चन्द्र बन्नुभन्दा अघि भानुभक्तको रामायण उहिल्यै नै लेखिइसकेको थियो । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गोविन्दबहारदुर गोठाले, विजय मल्ल, बालकृष्ण समजस्ता एकसेएक लेखकले साहित्य लेखेका थिए । तर, ती साहित्यमाथि सिनेमा बन्न सकेनन् ।
नेपालमा सिनेमाको भन्दा साहित्यको भण्डार ओजस्वी थियो । त्यसलाई सिनेमामा एक्स्पोज गरिएन । सिनेमा बनाउने उद्देश्यले सरकारले शाही नेपाली चलचित्र संस्थानको स्थापना गर्याे । तर त्यो पनि अपेक्षित प्रभावकारी भएन ।
अझै प्रश्न छ कि, श्रीधर खनालले ‘मनको बाँध’ पहिलो स्क्रिप्ट हो त ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन त्यही बेला बन्नुपर्ने नि ? प्रेमपिण्ड, वासुदेव, मुकुन्द इन्दिराजस्ता सिनेमा त्यही बेला बन्नुपथ्र्याे । साहित्यिक ग्रन्थहरूलाई एकातिर थन्क्याएर, बम्बईको चलचित्र उद्योगमा अभिनयमा स्थान पाउनका लागि संघर्ष गरिरहेको व्यक्तिलाई निर्देशको रूपमा भित्र्याएर सिनेमा बनाएर हुन्छ ? कलकत्ताको देवुसेन नामक पेसावन लेखकले लेखेको कथामा तत्कालीन चलचित्र संस्थानका सदस्य श्रीधर खनाललाई कथा लेख्न लगाएर सिनेमा बनाउने हो ?
मैले त मेरो जीवन खेर फालेसरह भयो । त्यसका लागि संघर्ष गरिएको त होइन । तर, चलचित्रकर्मी हुन संघर्ष गरिहेका मान्छेले जीवन त्यत्तिकै खेर फाल्ने ? त्यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे कसैले पनि प्रश्न उठाएको छैन ।
शान्तक्रुजका गल्लीमा देवु सेन र मुक्तक अहमद नाम गरेका दुई जना भारतीय लेखकहरूले सिनेमा पटकथाको पसल खोलेर बसेका थिए । तर, हाम्रा चलचित्र निर्माता निर्देशकहरूले त्यो सिनेमाको कथा किनेर नेपालीमा उल्था गरेर बनाएको सिनेमा नेपाली हुन्छन् ? त्यसलाई नेपाली चलचित्र उद्योग मानेर, नेपाल सरकारले संसारभरिका चलचित्रलाई मान्ने ? त्यो कसरी न्यायसंगत भयो ?
नेपाली वास्तविक काल त्यो बेला सुरु भयो, जतिबेला नेपालीले नेपाली पटकथा लेख्ने कार्य गरे । पहिलो पटकथा ‘बदलिँदो आकाश’ हो । नेपाली सिनेमाको पहिलो स्क्रिप्ट राइटर लक्ष्मीनाथ शर्मा हुन् । नेपाली सिनेमाको श्रीविन्दु त्यहीँदेखि नै हो ।
पछिल्लो समय दिपेन्द्र के. खनाल आफैंले लेख्छन् । रामबाबु गुरुङको सिनेमाको स्क्रिप्ट उनले नै लेखेका हुन् । मैले बनाएको सिनेमाको सम्पूर्ण पटककथा आफैंले लेखेको हुँ । अहिले गर्व लाग्छ । जसलाई नेपाली चलचित्र उद्योग प्रारम्भ गरे भन्ने श्रेय दिइएको छ, तिनले दुईवटा अपराध गरे । एउटा, नेपाली पटकथा लेखाउनै नपर्ने मान्छेलाई नेपाली सिनेमाको नाम लिएर पटकथा लेखाउन लगाइयो । दोस्रो, त्योभन्दा ठूलो अपराध तिनको सट्टा आफ्नो नाम पटकथाकार भनेर क्रेडिट टाइटलमा राख्ने । त्यो कुन हदसम्मको अपराध हो ? समीक्षा जरुरी छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको खडेरी छ । उनीहरूले सिनेमा बारे छलफल, विश्लेषण, विवेचना, चिन्तन र मनन गर्लान् भनेर सोच्नु कल्पना बाहिरको कुरा हो । इतिहास केलाउने हो भने अक्षम्य गल्तीहरूका बारेमा हामीले दिल खोलेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । जुन आजसम्म भएको छैन ।
नेपाली सिनेमा पहिचानका लागि संघर्षशील छ । अहिले चलचित्र उद्योग भन्ने गरिएको छ । त्यो गलत प्रारम्भका कारण नेपाली चलचित्रले नेपालीत्व समेट्न सकेन । र, त्यसकै लागि तीन–चार दशक संघर्ष गर्नुपर्यो । अब उक्त अभिशापबाट मुक्ति पाउन राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।
यसका लागि नेपाली सिनेमाबारे प्राज्ञिक चिन्तन–मनन हुन जरुरी छ ।
सिनेमाको कुरा गर्दा पहिलो नायिका र नायकको मात्रै कुरा भए । तर, सिनेमाको स्क्रिप्टका बारेमा कहिल्यै कुरा गरिएन । मैले प्राज्ञिक चिन्तनका कुरा गर्दा आमननगरिकले जान्नुपर्ने पटककथाको इतिहास हो । यो सबैले जान्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रमा सकेसम्म नक्कल नगरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
थर्ड ग्रेड हिन्दी सिनेमाको नक्कल गरेर नेपाली सिनेमा बनायौं । तर, कोरियन, इरानी सिनेमाको नक्कल गरिएन । नक्कल पनि गतिलोको गरिएन । कुरा के भने, सिनेमा नराम्रो बनाउन पाइन्छ । तर नक्कल गर्न पाइँदैन ।
आफैंले बनाएको सिनेमा बासुदेव पाँच मिनेट हेर्न सक्दिनँ । हरेक फ्रेममा त्रुटि देख्छु । त्यो बेला मलाई सिनेमा बनाउन आउँदैन थियो । जति मलाई आउँथ्यो, त्यति बनाएँ ।
तर मैले इमानदारीपूर्वक बनाएँ । त्यो बनाउनु एउटा उद्देश्य थियो । नेपालीहरू पनि पटकथा लेख्न सक्छन् भन्ने देखाउनु थियो ।
हरिवशंको प्रसंग जोड्न चाहन्छु । उनले बनाउन चाहेको सिनेमा बल्ल बन्न थालेको छ । उनी एकदम सही छन् ।
यस्ता खालका सिनेमाका कुरा गर्दा आज बनिरहेका पशुपति प्रसाद, जात्रा, जात्रैजात्रा, छक्कापञ्जा सिरिजजस्ता चलचित्र हुन् ।
चलचित्र ‘सिन्दुर’मा विश्व बस्नेत र म मुख्य पात्रको रूपमा थियौं । त्यसमा मेरो खासै भूमिका नै थिएन । त्यस्तो पनि सिनेमा हो त ? त्यो सिनेमा खेलेको थिएँ, भन्दा लाज लाग्छ मलाई । त्यसले नेपालीपन बोकेको छैन ।
दौरा सुरुवाल लगायो । लोकगीत बजायो । र, मादल बजाएर नाच्यो, त्यो कसरी नेपाली भयो ? सबैमा मेरो अग्राह के छ भने धैरै वर्ष नेपालीले नेपाली सिनेमाका लागि पटकथा लेखेनन् । फलस्वरुप नेपाली सिनेमाले आफ्नो अस्तित्व लर्बराइरह्यो ।
गम्भीर किसिमको विवेचना गर्ने हो भने नेपाली सिनेमाले आफ्नो बाटो कहाँ बिरायो ? त्यसको मूल कारण स्क्रिप्ट नै हो ।
कमजोर पटकथाका कारण नै आजको दिनसम्म सिनेमाहरू सफर गरिहेका छन् । थोरै राम्रा सिनेमाले ख्याति आर्जन गरेका छन् । त्यो ख्यातिको नराम्रा सिनेमाले सिर्जना गरेको क्षतिभन्दा ठूलो छ । त्यसकारण क्षति कम देखिन्छ । ख्याति अलि बढी देखिन्छ ।
९५ प्रतिशत सिनेमा फ्लप भइरहेका छन् । त्यसले राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई नै क्षति गरेको छ । सिधै तथाकथित रूपमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई क्षति पुर्याएको त छँदै छ । तर, त्यो क्षति ४÷५ वटा सिनेमाले प्राप्त गरेको ख्यातिको तुलनामा ठूलो छ ।
त्यो ख्यातिका कारण राष्ट्रिय सिनेमा बनेको छ । तर, यो हिसाबले नेपाली सिनेमा अघि बढ्दै गयो भने कालान्तरमा नेपालको नेपाली सिनेममा उद्योगको नगरी सिक्किमवासी हुनेछ ।
भोलिका दिनमा सिक्किमले १० वटा राम्रा सिनेमा बनाउँदा नेपालले २ वटा राम्रा सिनेमा बनाउन सक्यो भने नेपाली सिनेमा सप्रन्छ ।
(राष्ट्रिय चलचित्र कन्फ्रेन्समा नीर शाहले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ४, २०७६, २१:३९:००
रहेनन् प्रसिद्ध गीतकार थापा
कीर्ते कसुरमा फरार वडाध्यक्ष अदालतमा हाजिर, धरौटीमा रिहा
बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक : अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भीम रावल पनि सहभागी
अध्यक्ष राणाले औँल्याए बजेटका ७ कमजोरी
लण्डनमा भारतीय मालिकाले घर निकाला गरेका नेपालीको उद्धार
काठमाडौं महानगरद्वारा चिकित्सक संघलाई १ हजार थान ज्याकेट सहयोग